8 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Kɔ Farao nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Ma me nkurɔfo no kwan ma wɔnkɔsom me.+ 2 Na sɛ wokɔ so sen wo kɔn na woamma wɔankɔ a, mɛma mpɔtorɔ aba w’asase so baabiara.+ 3 Na mpɔtorɔ bɛyɛ Asubɔnten Nil mu manyamanya, na wɔbɛba wo fie ne wo pia mu ne wo mpa so ne wo nkoa afie ne wo manfo ho, na wɔbɛba wo fononoo ne nea wɔfɔtɔw mmɔre wom nyinaa mu.+ 4 Mpɔtorɔ no bɛforo aba wo ne wo manfo ne wo nkoa nyinaa so.”’”+ 5 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Ka kyerɛ Aaron sɛ, ‘Fa wo poma+ na teɛ wo nsa wɔ nsubɔnten, Nil asuasu, ne atare so, na ma mpɔtorɔ mmra Egypt asase so baabiara.’” 6 Na Aaron teɛɛ ne nsa wɔ Egypt nsu so, na mpɔtorɔ bɛkataa Egypt asase nyinaa so. 7 Na akɔmfo no nso de wɔn asumansɛm yɛɛ saa ara, na wɔmaa mpɔtorɔ bɛkataa Egypt asase nyinaa so.+ 8 Ɛnna Farao frɛɛ Mose ne Aaron ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monsrɛ Yehowa+ na ɔmma mpɔtorɔ no mfi me ne me man so nkɔ, na afei de mɛma nkurɔfo no kwan ma wɔakɔbɔ afɔre ama Yehowa.”+ 9 Mose ka kyerɛɛ Farao sɛ: “Mesrɛ wo, w’ankasa kyerɛ me da ko a mensrɛ mma wo ne wo nkoa ne wo nkurɔfo na wonyi mpɔtorɔ no mfi mo so ne mo afie mu. Ɛbɛka Asubɔnten Nil no mu de nkutoo.” 10 Ɛnna ɔkae sɛ: “Ɔkyena.” Enti Mose kae sɛ: “Ɛbɛyɛ sɛnea woaka no, na ama woahu sɛ obiara nni hɔ a ɔte sɛ Yehowa yɛn Nyankopɔn no,+ 11 na mpɔtorɔ no befi wo ne w’afie ne wo nkoa ne wo man so akɔ. Na ɛbɛka Asubɔnten Nil no mu de nkutoo.”+ 12 Afei Mose ne Aaron fii Farao anim kɔe, na Mose teɛɛm frɛɛ Yehowa,+ mpɔtorɔ a ɔde aba Farao so no nti. 13 Na Yehowa yɛɛ nea Mose kae no,+ na mpɔtorɔ a wɔwɔ afie mu ne adiwo ne mfikyiri nyinaa fii ase wuwui. 14 Na wɔboaboaa wɔn ano akuwakuw pii, na asase no so fii ase bɔnee.+ 15 Bere a Farao hui sɛ ahotɔ aba no, opirim ne koma,+ na wantie wɔn sɛnea Yehowa kae no.+ 16 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Ka kyerɛ Aaron sɛ, ‘Teɛ wo poma+ no na fa bɔ fam, na asase so mfutuma bɛdan ntummoa* wɔ Egypt asase so nyinaa.’” 17 Wɔyɛɛ saa. Na Aaron teɛɛ ne nsa de ne poma no bɔɔ fam, na ntummoa baa nnipa ne mmoa nyinaa so. Na asase no so mfutuma nyinaa dan ntummoa wɔ Egypt asase so baabiara.+ 18 Na akɔmfo no nso bɔɔ mmɔden sɛ wɔde wɔn asumansɛm+ bɛma ntummoa aba, nanso wɔantumi.+ Na ntummoa baa nnipa ne mmoa so. 19 Enti akɔmfo no ka kyerɛɛ Farao sɛ: “Ɛyɛ Onyankopɔn+ nsateaa!”+ Nanso Farao kɔɔ so pirim ne koma,+ na wantie wɔn sɛnea Yehowa kae no. 20 Na Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Sɔre anɔpatutuutu kogyina Farao anim.+ Hwɛ, ɔreba nsu no ho! Na ka kyerɛ no sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Ma me nkurɔfo no kwan ma wɔnkɔsom me.+ 21 Na sɛ woamma me nkurɔfo no kwan ankɔ a, mɛma ahurii+ aba wo ne wo nkoa ne wo manfo ne w’afie so, na ahurii bɛhyɛ Egypt afie ne asase a wɔte so no nyinaa so mã. 22 Saa da no mɛyɛ Gosen asase a me man te so no soronko na ohurii biara renkɔ hɔ,+ na woahu sɛ mene Yehowa wɔ asase mfinimfini.+ 23 Na mede ɔhye bɛto me nkurɔfo ne wo nkurɔfo ntam.+ Mɛyɛ sɛnkyerɛnne yi ɔkyena.”’” 24 Yehowa yɛɛ saa, na ahurii tuu yuu bɛhyɛɛ Farao fie ne ne nkoa afie ne Egypt asase nyinaa so mã.+ Na ahurii+ no nti asase no so sɛee. 25 Afei Farao ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ: “Monkɔbɔ afɔre mma mo Nyankopɔn wɔ asase no so.”+ 26 Na Mose kae sɛ: “Ɛnyɛ papa sɛ yɛbɛyɛ saa, efisɛ yɛde ade a Egyptfo kyi+ na ɛbɛbɔ afɔre ama Yehowa yɛn Nyankopɔn. Na sɛ Egyptfo hu sɛ yɛde ade a wokyi abɔ afɔre a, so wɔrensiw yɛn abo? 27 Enti yebetu kwan nnansa akɔ sare so akɔbɔ afɔre ama Yehowa yɛn Nyankopɔn sɛnea waka akyerɛ yɛn no.”+ 28 Na Farao kae sɛ: “Mɛma mo kwan+ ma moakɔbɔ afɔre ama Yehowa mo Nyankopɔn wɔ sare so.+ Nanso monnkɔ akyiri pii. Ɛyɛ a monsrɛ mma me nso.”+ 29 Ɛnna Mose kae sɛ: “Merefi w’anim akɔsrɛ Yehowa, na ɔkyena ahurii no befi Farao ne ne nkoa ne ne man so akɔ. Nanso hwɛ na Farao annaadaa yɛn bio sɛ ɔremma nkurɔfo no nkɔbɔ afɔre mma Yehowa.”+ 30 Na Mose fii Farao anim kɔsrɛɛ Yehowa.+ 31 Na Yehowa yɛe sɛnea Mose kae no,+ na ahurii no fii Farao ne ne nkoa ne ne man so kɔe.+ Biako mpo anka. 32 Nanso Farao pirim ne koma saa bere yi nso, na wamma nkurɔfo no kwan ankɔ.+